Yaa ka Danbeeyay Duqayntii Loo Gaystay Soomaalida Doonta Saarnayd ee Dalka Yemen (VIDEO)
March 18, 2017 – Nin kamid ahaa badmaaxiinta doonta waday oo ka badbaaday weerarkaasi ayaa sheegay in Doonida la weeraray ay ka buuxeen Qaxooti Soomaaliyeed oo u badnaa carruur iyo haween, kuwaasi oo ka cararayey dagaalka ka socda dalka Yemen, kuna sii jeeday Xeebaha dalka Suudaan.
Badmaaxan oo lagu magacaabo Al-xasan Qaalib Maxamed, ayaa waxa uu tilmaamay inay Doonida ka ambabaxday Deegaanka Ras Arra ee Xeebta Koonfureed ee Gobalka Xudeydah, isla markaana doonida la weeraray iyadoo 50-KM ka baxsan Xeebta ku dhow Gacan-biyooddka Bab Al-mandab.
Mukhalaska ayaa waxa uu sheegay in Markab Dagaal iyo Helikoptar ay rasaas ku fureen dadkii la socday Doonidaasi.
Sarkaal sare oo u hadlay Hay’adda Muhaajiriinta Caalamiga ee IOM ayaa sheegay in 42 mayd laga helay doonida dhexdeeda.
Maxamed Cabdi-kheyr oo ah Agaasimaha Gurmadka ee Hay’adda IOM ayaa Weriyayaasha ugu sheegay magaalladda Geneva ee dalka Zwitserland inaan la aqbali karin weerarkaasi oo dhacay abaarihii 03:00 saq-dhexe ee habeenkii Jimcaha soo galaysay.
Waxana agaasimaha intaasai ku daray inay ku-dhawaad 75 nin iyo 15 haweeen ka badbaadeen Weerarkaasi, loona gudbiyey Xarunta dadka lagu hayo ee magaalada Xudeydah.
Qaar ka mid Maydadka ayaa la dhigay Suuqa Kalluunka ee Al-xudeyda, kadib, markii boosas looga waayey Qaboojiyayaasha la geliyo maydadka.
Dhinaca kale, Afhayeenka Isbahaysiga Milliteri ee Sacuudiga uu hoggaamiyo, Jeneral Axmed Al-casiri ayaa beeniyey inay ka dambeeyeen weerarkaasi lagu dilay, laguna dhaawacay Qaxooti Soomaalida ee ku safraysay doonida.
Afhayeenka oo la hadlay Wargeyska Asharqal-awsad ayaa ka dhawaajiyay inaysan Isbahaysiga ka hawlgelin Gobalka Xudeydah, xilligii la sheegay in la weeraray Qaxootigaasi.
Kooxaha Xuutiyiinta ee ka dagaalama dalka Yemen ayaa dhankooda xusay in aysan haysanin diyaarado Gantaalo rida ,dadkaasi masaakiinta ahna ay gumaadeen Ciidamada xulufada Sucuudiga.
March 18, 2017 tuugahaladilo2015